Waad ku mahadsantahay wanaagga asxaabta! | Martech Zone
Monday, August 4, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Intiinii dareentay inaan ka baxay shabakada dhamaadka usbuucan, waxaan ka cudurdaaranayaa xitaa ma dhajin qoraal ama labo. Waxaan xoogaa dhibaato qoys ah ku qabnay guriga oo qaatay dhammaan dareenkeyga iyo tamarteyda. Si kasta oo ay muhiim u tahay balooggeygu isla markaana u ilaaliyo sumcaddayda internetka, waxba ugama muhiimsan qoys ahaan.
Aad baan ugu mahadnaqayaa saaxiibbaday, khadka tooska ah iyo kan khadka toosanba, xilliyadan adag. Waxaan hayey dhowr emayl isbuucaan aniga oo kaliya weydiinaya haddii wax waliba caadi yihiin. (Wali caadi maahan, laakiin halkaas ayey ku gaari doontaa.)
Aniga oo ka hadlaya asxaabta, kani waa qormo aan ugu talo galay in aan mudo sameeyo. Saaxiib wanaagsan iyo saaxiib Digir Bean, Jason Bean (xiriir lama leh) ayaa qoray qoraal Be Douglas KarrSaaxiib
Waxaas oo dhami waxay bilaabeen markii Jason uu dejinayay kaamiradiisa si uu sawir waqti leh uga qaado labadeena. Waan ku jees jeesay anigoo taagan iyadoo gacanta ku haysa isaguna sawirka ayuu ka qaaday. Waxaan markaa la nimid fikradda ah inaan wax qorno oo aan kuwa kale 'buuxino' oo aan saaxiib noqonno. Waa tan jawaabtii aan helnay!
Runtii dhab ahaantii madaxa uma salaaxi doono John Uhri, waxaan doonayay inaan ka riixo miiska, kamaraduna way qabatay!
Waxaan la kulmay Lorraine iyo ninkeeda dhawr jeer dhacdooyinka gobolka waana ku raaxaysanay midba midka kale xoogaa yar (ugu yaraan waxaan rajaynayaa inay ku raaxaysteen tayda!). Waxaan u maleynayaa inaan u eg nahay sidii qoys dib loo mideeyay!
Shabakadda Michelle waa igu cusub tahay - laakiin durba waan ku raaxeysanayaa tiraabteeda iyo fikradeeda shaqsiyeed. Waxaan rajeynayaa inaan la kulmi doono Michelle oo aan cabi doono koobkaas kafeega ah!
Podcaster maxalli ah, iyo ganacsade muusig si xad dhaaf ah, Darrin Snider xitaa waqti ayey ku qaadatay in ficilka lagu soo galo! Waxaan la kulmay Darrin at Xaqiiqda oo runtii u riyaaqay wadahadalkeenna. Waxaan rajeynayaa inaan mar labaad waddooyinka ka gudbo dhowaan!
Weli waad ku geli kartaa madadaalo! Waa tan sawirka asalka ah inaad Photoshop naftaada ka gali karto! Markasta oo saaxiibo badani bataan, ayaa kasii wanaagsan!
Tags: bixintaftcdesign graphicsharci-darrada ahsharcishirka suuq geyntatilmaamaha slideshareviews
Aug 4, 2008 at 9: 46 AM
Qiyaas macnaheedu waxa weeye inaadan helin qaboojinta Google-ka qabow ee la dhisay sidoo kale markaa. Waxaan rajeyneynaa in waxyaabuhu sii jilcayaan xitaa in ka sii badan maalinta ay socoto. Xaqiiqdii waad saxan tahay, laakiin wax ka muhiimsan qoyskeyga ma jiraan. Caqabada ayaa ah sida la iskugu waafajin lahaa waqtiga la qaadashada qoyska iyo waqtiga lagu qaadanayo sameynta waxyaabahaas waajibka ah si aad u daryeesho oo aad u siiso iyaga sidoo kale. Waan hubaa inaan goor dhow kugu arki doonno Koobka Bean.
Agoosto 4, 2008 saacaddu markay ahayd 2:34 PM
Weli waxaan rabaa inaan dhiso plugin-kaas!
Waad ku mahadsantahay taageerada (iyo saaxiibtinimada) Jason! Waxaan caawa kugu arki doonaa Koobka Bean!